कफीको बिरुवा मर्न थालेपछि … |
Thursday, March 19, 2020 । हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक
हेलम्बु गाउँपालिका–६ इचोक गाउँका कफी कृषकका रूपमा चिनिएका रोमबहादुर पण्डित एकाएक कफीको बिरुवा मर्न थालेपछि पिरोलिनुभएको छ । डढुवा र किराले अधिकांश बिरुवा फलसँगै सुकाएर मरेपछि व्यावसायिक कफी उद्यमी पण्डित भावुक देयिो । ‘वार्षिक कफी बेचेर नै रु तीन लाखभन्दा बढी आम्दानी हुन्थ्यो तर यो वर्ष हिउँदसँगै प्रायः बोट मरेको छ, फल खेर गएको छ’, उनले खेतबारी वरिपरि टोलाउँदै गुनासो गरे ।
लाखाँै लगानी र दिनरातको मेहनतको पसिना एकै झट्काले गुम्ने अवस्थामा पुगेपछि अन्योलमा परेको उहाँले सुनाउनुभयो । तेह्र रोपनी आफ्नै जग्गामा व्यावसायिकरूपमा पण्डितले एक हजार ३०० बोट कफीको बिरुवा लगाएको थियो । ‘हिउँदसँगै बिरुवा डढेका छन् । किरा लागेर झरिरहेका छन् । सबैलाई गुहारेका छौँ’, उनले भने ।
तीन वर्षको मेहनत हिउँदसँगै फल टिप्ने बेलामा बोटै मर्न थालेपछि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१० का यमबहादुर महत भक्कानियो । आठ रोपनी खेतबारीमा उनले ७०० बिरुवा लगाएर कफी खेतीलाई जमाउँदै आएको थियो । ‘आम्दानी हुने बेला दशा लाग्यो, सबै बोट मरेको देखेर रुन मन लागेको छ हजुर’, उनले भने । तीन वर्षबाट लगातार कफीखेतीमा जमिरहेका उहाँले रु डेढ लाख बराबरको कफी बिक्री गर्दै आएको छ ।
कफी खेतीले हराभरा देखिने जमीनमा लाखौँ पैसा र पसिना सुकेका बोटसँगै क्रमशः हराइरहेको उनको अनुभव छ । ‘हाम्रो सातो गएको छ, यस्तो कहिले हुँदैनथ्यो, के कारणले यस्तो भएको हो बुझ्न सकिएको छैन’, उनले भने ।
पण्डित र महत जस्तै इन्द्रावती गाउँपालिकाको बाँडेगाउँका श्यामबहादुर कटुवाल सबैजस्तो बोट फलले भरिएलगत्तै एकाएक मरेपछि भौँतारिरहेको छ । ‘सात रोपनी जग्गामा वार्षिक लाखाँै मूल्य बराबरको कफी लगाइरहेको थिएँ, सबै डुबेजस्तो भएको छ, दिक्क भएर बस्नुबाहेक विकल्प छैन, के गर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे ।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । डढुवा र किराले कफीको अधिकाशं बिरुवा मरेपछि जिल्लाको तीन नगरदेखि पाँच गाउँपालिकाका गरी दुई हजार १५० कृषक परिवारको व्यथा एउटै छ । डढुवा र किराले कफीको बोट मर्ने क्रम नरोकिएपछि व्यावसायिक कफी खेतीमा एकजुट भएर कस्सिरहेका कृषक निरुत्साहित बनेका छन् । जिल्लाभर १२४ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफीखेती भइरहेकामा फल लाग्न शुरु भएलगत्तै मरेको जिल्ला कफी सहकारी सङ्घ, सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष मञ्जु थापाले जानकारी दिइन् ।
जिल्लाभरका १२ वटा सहकारी र १८ समूहका व्यावसायिक कफी कृषकले फल बोटसँगै मरेको खबर पाएलगत्तै स्थलगत पुगेर रिपोर्टिङसहित सम्बद्ध सबै निकायलाई गुहारिरहेको उनले उदाहरण दिइन् । ‘हिउँदे चिसोको रोगका कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी बिरुवा मरेपछि कृषक विचल्लीमा छन्, लगानी डुबेको छ, रोग पहिचान र रोकथामका लागि नमूना परीक्षण गर्न सूचना दिइसकेका छौँ’, उनले भनिन् ।
जिल्लाभर वार्षिक उत्पादन हुने ३० मेट्रिक टनभन्दा बढी कफीबाट मात्रै वार्षिक अनुमानित २ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । उनका अनुसार अहिले जिल्लाभर १ करोड रुपैयाँ बराबरको बोट र फल मरेर सकिएको छ ।
कृषकको समस्याबारे नेपाल बाली विज्ञान महाशाखा, कफी सङ्घलगायतका सम्बन्धित सम्पूर्ण संस्थालाई सूचना र निवेदन दिइसकेको उनले प्रष्ट्याइन् । असारमा शुरु गरिने कफी खेतीलाई शुरुमा पूरा फल लाग्न तीन वर्षको समय लाग्ने गर्छ । एउटा बोटमा १० किलोसम्म फल्ने गर्छ । कफी बजारमा प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँमा बिक्री हुने गर्छ ।
‘आगामी जेठ अन्तिमसम्म कफी बिक्रीका लागि पठाइसक्ने गर्छौं’, उनले भनिन् । विसं २०६४ देखि एउटा सामाजिक संस्थाबाट शुरु गरिएको कफी खेतीलाई सहकारी सङ्घबाट व्यवस्थित बनाएर जिल्लामा शुरु गरिएको हो । जिल्ला कफी सहकारी सङ्घबाट ‘अर्गा्निक सटिफिकेसन’ सकेर पैठारी गर्न थालेको आठ वर्ष पुगिसकेको छ ।
१. दुर्गममा आफ्ना दुःख भुलेर सन्देश प्रवाह गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी
२. आइतबारदेखि भरी सिलिण्डर ग्यास पाउने
३. सडक लेनमा रङ्ग लगाउँदै कामदार
४. सेनाको रगतले सुत्केरीको ज्यान बच्यो
५. ‘लकडाउन’ को समयमा पनि अत्यावश्यक काम गर्न चाहन्छन् निर्माण व्यवसायी
६. चीनको उहानमा लकडाउन समाप्त, सडकमा मानिसको भीड